ကတ်ထရီနာ မုန်တိုင်းကြောင့် ကလေးများမွေးစားရန် ဆန်ဒရာဘူးလော့ခ် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ - Yangon Media Group
အင်အားပြင်း ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်း ကတ်ထရီနာကြောင့် ကလေးများမွေးစားရန် ဆုံး ဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု မင်းသမီး ဆန်ဒရာဘူးလော့ခ်က ဖွင့်ဟပြောဆိုလိုက်ကြောင်း ဇွန် ၅ ရက် Contactmusic သတင်းကဆိုသည်။ ကိုယ်ပိုင်သားသမီးမရှိသော ဆန်ဒရာဘူးလော့ခ် (၅၄)နှစ်တွင် လူဝစ်(၈)နှစ်နှင့် လေလာ(၅)နှစ်ဟူသော မွေးစားသားသမီးနှစ်ဦးရှိသည်။ ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ်နှင့် ၂ဝ၁၅ ခုနှစ်တို့တွင် အသီးသီး မွေးစားခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။
ကလေးများမွေးစားရန် ယခင်ကတည်းကပင် စိတ်ကူးရှိခဲ့သော်လည်း ၂ဝဝ၅ ခုနှစ်တွင် ကတ်ထရီနာမုန်တိုင်း တိုက်ခတ်ပြီးသည့်နောက်မှသာ မိခင်ဘဝခံယူရန် ယတိ ပြတ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆန်ဒရာဘူးလော့ခ်က ပြောသည်။ ”ကလေးမွေးစားမယ်ဆိုတာ အရင်ကတည်းက စိတ်ကူးရှိခဲ့တာပါ။ ဒါပေမဲ့ ချီတုံချတုံ ဖြစ်နေတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ကတ်ထရီနာမုန်တိုင်းကြောင့် လူတွေ သေကျေပျက်စီးတာ ကြားရတဲ့အခါ မွေးစားဖို့ ယတိပြတ်ဆုံး ဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်”ဟု ဆန်ဒရာဘူးလော့ခ်က ဆိုသည်။ မိခင်ဘဝခံယူရန် သင့်၊ မသင့် အစတွင် သံသယဝင်ခဲ့သော်လည်း ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ဂျက်စီဂျိမ်းနှင့် ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ်တွင် ကွာရှင်းပြီးချိန်တွင် မိခင်တစ်ဦးအဖြစ် ယုံကြည်မှု အခိုင်အမာရှိလာခဲ့သည်ဟုလည်း ဆန်ဒရာဘူးလော့ခ်က ပြောသည်။
”သားလေးကို ကျွန်မမွေးထားတယ်။ သူက ကျွန်မမျက်လုံးတွေကို ကြည့်တယ်။ သူက ဥာဏ်ကောင်းတယ်။ ကျွန်မသားလေးက လိမ္မာတယ်” ဟု ဆန်ဒရာဘူးလော့ခ်က ပြန်ပြောင်းပြောဆိုသည်။ ပထမမွေးစားသား လူးဝစ်၏ တောင်းဆိုချက်အရ နောက်ထပ်သမီးကလေး လေလာကို မွေးစားဖြစ်ခဲ့သည်ဟုလည်း ဆန်ဒရာဘူး လော့ခ်ကပြောသည်။ လူးဝစ်သည် သုံးလသားအရွယ်မှာပင် မုန်တိုင်းဒဏ်ကြောင့် မိဘမဲ့ဖြစ်ခဲ့ရသူ ဖြစ်သလို လေလာမှာလည်း People မဂ္ဂဇင်းမျက်နှာဖုံး တွင် ဖော်ပြခံခဲ့ရသော ဒုက္ခသည် ကလေးမ လေး ဖြစ်သည်။
ဟာဗေးဝိန်းစတိန်းကို ရုံးတင် စစ်ဆေး
လီယောင်အဲ ပါဝင်သည့် သူလျှို - အချစ် ဇာတ်လမ်းတွဲ လာမည့်နှစ်တွင် စတင်ပြသမည်
ကနီမြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး အဂတိ လိုက်စားသည်ဟု ဆိုကာ ထိရောက်စွာ အရေးယူပေးရန် မြို့ခံများ??
အင်းစိန်မြို့နယ် တညင်းကုန်းဈေးဟောင်း ကုန်စိမ်းဈေးအပြင် ပျံကျတန်းအတွင်း လူသတ်မှုဖြစ်ပွာ??